Iflethi evulekileyo nebethwa ngumoya eyi-3 qts, ePraia de Castelhanos - I-Airbnb
Iflethi evulekileyo nebethwa ngumoya eyi-3 qts, ePraia de Castelhanos
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMaria Do Carmo
UMaria Do Carmo yi-Superhost
Esi sakhiwo, esenziwe yiprojekthi yosapho, sakhiwa ekupheleni kwePraia dos Castelhanos, ibhloko enye ukusuka elunxwemeni, ukuze sikwazi ukufumana umoya omhle wendalo wecebiso lolwandle.
Le flethi inamagumbi aliqela, ipholile, ikhanya kakuhle, inegumbi lokuhlala elidityanisiweyo, ikhitshi kunye nebhalkoni, ibe yindawo elula nefudumeleyo. Inamagumbi okulala ayi-3 (igumbi elinye) kunye neekhabhathi, izipili kunye neefeni zesilingi kwaye zonke zihlolisiswa kwiingcongconi.
- Iflethi inabantu abayi-7, kuquka abantwana.
- Iqulethe i-TV, ifriji, isitovu, i-microwave, i-blender, umatshini wokwenza ikofu, umatshini wokwenza isanti, umatshini wokuhlamba impahla neayini, kunye neefeni zesilingi kumagumbi okulala nakwiifeni zodonga kwigumbi lokuhlala nasekhitshini.
- Ikhitshi linezitya, izinto zokuhombisa, iiglasi, iimbiza, ipani yokufraya, ipani, imbiza, njl. Ngenxa yezizathu zokhuseleko, asinaso isixhobo sokupheka esineengcindezi.
- Isitovu sakudala (i-heirloom yentsapho) sisebenza kakuhle.
- Igaraji ineendawo ezimbini eziqukiweyo.
- Ukufikelela kwiflethi, kukho izitepsi ezimbini.
- Kodwa ke, kukho imiqamelo, ngenxa yezizathu zokufaka izinto, akukho zinto zebhedi nezebhafu.
- Ukuze siphephe iindleko ezongezelelekileyo zeendwendwe, asiyibhatalisi imali yokucoca. Ukuze sikwazi ukuyigcina injalo, sicela iindwendwe ukuba zisebenzisane ngokukhupha inkunkuma, ziphephe ukushiya izitya ezimdaka esinkini nakwizinto zokutya ezishiyekileyo efrijini.
I-Praia dos Castelhanos lulwandle olumnandi losapho, olunomthunzi wemithi yamantongomane, olunamaza angenamaza kwaye, kumaza aphantsi, kunye namachibi amancinci emvelo alungele abantwana. Ilungele ukuhambahamba ixesha elide xa kutshona ilanga. Ngexesha lonyaka elixakekileyo, ixakekile emini kwaye, ngokubanzi, ithe cwaka ebusuku. Ngexesha lonyaka elithe cwaka, yindawo entle yokuphumla uze ugcwalise amandla akho.
Umbuki zindwendwe ngu- Maria Do Carmo
Esi sakhiwo sinomntu ohoyayo, onokuqhagamshelana naye lula xa kukho isidingo. Uqhagamshelwano lomnikazi ngoWhatsApp luza kunikezelwa emva kokubhukisha.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Guanabara